रूस मा 19 औं शताब्दीमा शिक्षा र विज्ञान
रूस लागि 19 औं शताब्दीमा पनि regicide पावलले म, पछि अलेक्जेन्डर म पास भएको शताब्दीमा शक्ति को सुरुमा विज्ञान र शिक्षा एउटा ठूलो परिवर्तन आवश्यक जो, तेजी विकास गर्न थाल्दा जब खोल्दै बिन्दु थियो। को 19 औं शताब्दीमा यी सबै परिवर्तनहरू पहिलो र दोस्रो आधा भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
को 19 औं शताब्दीको सीमा मा रूस
विरासत जवान सम्राट, पायो राज्य अघिल्लो अवधिको तुलनामा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू जो भइरहेको छ। यसलाई केही महत्त्वपूर्ण कारक देशको महानताका संकेत भनेर याद गर्न सम्भव छ:
कारण क्रिमीआ, काजकस्तान, को बाल्टिक राज्य अमेरिका, सही-बैंक युक्रेन र पश्चिमी बेलारुस को annexation वृद्धि क्षेत्र। एक परिणाम रूपमा र जनसंख्या थप 40 लाख 90% किसान थिए जसलाई मान्छे, भएको छ।। पनि विशेष गरी सेन्ट पीटर्सबर्ग र मास्को, को पाठ्यक्रम, रूस मा 19 औं शताब्दीमा विज्ञान को विकास प्रभावित जो, बढेको र शहरी जनसङ्ख्याको।
Romanov सबै भन्दा ठूलो मालिक भए र अन्य देशमा संपदा केही स्वतन्त्रता छ।
बजेट थप threefold भन्दा 18 औं सताब्दी तुलनामा वृद्धि।
तथापि, अलेक्जेन्डर म को शक्ति को आगमन को समय मा, रूस क्याच-अप लागि सम्पूर्ण आधुनिकीकरण योजना आफ्नै मान्छे को खर्च मा भयो जहाँ एक देश थियो, र विज्ञान, शिक्षा र संस्कृति धेरै सानो समय दिइएको छ।
को 19 औं शताब्दीको पहिलो आधा मा विज्ञान को विकास
यस शताब्दीको पहिलो आधा मा विज्ञान को विकास कुरा त्यस्तो उल्लेखनीय उपलब्धि हेर्न सम्भव छ कारण जो आज गर्न, समय मा वैज्ञानिकहरू द्वारा ज्ञात परिणाम मा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
रूस मा 19 औं शताब्दीमा विज्ञान - माथिका सबै, गणित, भौतिक र रसायन छ।
कजान विश्वविद्यालय गणित प्रोफेसर मा Nikolai Lobachevsky ज्यामिति मा नयाँ सिद्धान्त, "गैर-Euclidean" भनिन्छ विकास गर्न सक्षम थियो। चिकित्सक Nikolai Pirogov सर्जरी विचार गर्दा लामो समय को लागि चिकित्सा टाढा कदम गर्न सक्षम थियो। उहाँले पहिलो ईथर एनेस्थेसिया र प्लास्टर डाली प्रयोग, युद्ध मा लागू गर्न सक्षम थियो।
भौतिक, यस समयमा अध्ययन को मुख्य फोकस बिजुली थियो, र खोज गरिएको थियो जहाँ यो छ। बोरिस Jacobi को electroforming विधि खोलियो, र त्यसपछि धेरै बिजुली मोटर्स र telegraphs सिर्जना गरियो। एक भौतिक Vasily Petrov तपाईं कसरी प्रकाश र धातु चड्डी लागि बिजुली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ देखाउन सक्षम थियो, एक rarefied ग्याँस मा चाप र शुल्क छानबीन।
यो, यो अवधि र विज्ञान, खगोल विज्ञान समयमा विकसित त्यसैले, 1839 मा खोलिएको थियो, पुलकोभो वेधशाला, उहाँले काम जहाँ astronomer Vasily Struve, आकाशगंगा मार्ग विमान मा तारा एकाग्रता पत्ता गर्ने।
विद्यालय र विश्वविद्यालय
विज्ञान र रूस मा 19 औं शताब्दीको शिक्षा को शुरुवात मा परिवर्तन गरेको छ, र 1803 मा प्रत्येक जो एक विश्वविद्यालय निर्माण गर्न थियो छ शैक्षिक जिल्लामा, मा देश विभाजन गर्न उर्दी जारी। तर, यो 20 वर्ष मात्र तीन उच्च शिक्षा मास्को, कजान र सेन्ट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय सहित संस्थाहरू, अधिक पत्ता थियो। निकोलस म शिक्षा को विचार समर्थन गरे, र कुनै विश्वविद्यालय आफ्नो शासन अन्तर्गत खोल्न थियो। साथै, उहाँले बच्चाहरु सबै उत्तिकै serfs सिकाउनुभयो छैन पर्छ भनेर विश्वास गर्दछन्।
राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर केवल यस्तो Yaroslavl थियो जो सेन्ट पीटर्सबर्ग नजिकै Tsarskoye Selo र Demidov, जस्तै अनुहार मा आचरण।
राम्रो कुरा प्राविधिक प्रोफाइल को शैक्षिक संस्थाहरू थिए। यस शताब्दीको सुरुमा, यो केवल पहाड संस्थान, एक सानो पछि वन संस्थान देखा पत्ता थियो। निकोलस म ईन्जिनियरिङ् र सैन्य शिक्षा राम्रो, यो सेन्ट पीटर्सबर्ग र मास्को, साथै Artillery र ईन्जिनियरिङ् एकेडेमी खुला प्राविधिक संस्थाहरू थिए भने त।
महिला लागि शिक्षा
राम्रो र असल पत्नी र आमा खेती गर्न, Ekaterina द्वितीय मा राखिएको थियो जो महिला शिक्षा, को लडी विचार राम्रो झुकाव। Nizhny Novgorod, Astrakhan, साराटोभ, इर्कुत्स्क, को पाठ्यक्रम, मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग: तसर्थ, संस्थाहरू महान मूल को बालिका लागि धेरै शहर खुलेको छ।
रूस मा मानविकी 19 औं सताब्दी, एक उच्च सार्वजनिक चासो संग पहिलो आधा, मा इतिहास मा विकास गर्न थाले, र इतिहास र Antiquities को मास्को समाज द्वारा स्थापित भएको थियो। चासो पनि सामान्य इतिहास र भाषा बिज्ञान, पुस्तकहरू र periodicals को उत्पादन को सुरूवात थियो जो Slavonic, चिनियाँ अध्ययन सहित देखाइएको थियो।
प्रकाशन धेरै लोकप्रिय भएको छ, र 1809 मा विभिन्न विषयहरू को 68 पत्रिका र9समाचार पत्र मुद्रित। त्यहाँ अनुवाद काम थियो, र नागरिक मुद्रण को खोज र विकास को फलस्वरूप विदेशी साहित्य थाह बन्न।
हामी पनि देश Pushkin, Nekrasov र Turgenev सिक्दै, रूसी साहित्य उल्लेख गर्नुपर्छ। यो अवधिमा यस्तो तल्लो वर्गमा देखि सानो मान्छे को दुर्दशा रूपमा मुद्दाहरू उठाएको, तर एकै समयमा, मौखिक र लिखित फारममा लोक परम्परा गाया।
, (19 औं शताब्दीमा, दोस्रो आधा, रूस) विज्ञान शिक्षा
दोस्रो आधा, Feudalism पूंजीवाद तरिका दिंदा, एक उच्च शिक्षित मान्छे बीच, तर पनि साधारण कार्यकर्ता बीच मात्र होइन, विकास को स्तर आवश्यक छ, र पहिलो स्थानमा शिक्षा सामान्य जीवन संग सम्बन्धित छन् ती क्षेत्रहरु मा स्पर्श थियो।
तर, विकास ठाउँ पनि Feudalism संरक्षित छ जब autocracy द्वारा सताइयो र रूसी वैज्ञानिकहरू, लेखकहरू र कलाकारहरू धेरै गाह्रो काम थियो, कठिन अवस्थामा भएको थियो।
यो serfdom मानिसहरूलाई मुक्त गर्न समय, क्रांतिकारी आन्दोलन टाढा अगाडि Chernyshevsky, Dobrolyubov, Herzen र संघर्ष गर्दा विज्ञान अघि बढाउन मदत गरेको छ कि टिप्पण लायक छ। यो सबै मानिसहरूको फाइदाको लागि ठूलो आविष्कारहरू गर्न वैज्ञानिकहरूले spurred छ।
को 19 औं शताब्दीको दोस्रो आधा यस्तो भौतिक, गणित, रसायन, प्राणी विज्ञान र भूगोल रूपमा प्राकृतिक विज्ञान, विकास रूपमा विज्ञान को दृश्य को बिन्दुबाट विशेषता छ। यस्तो माग जीवन, उत्पादन को आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकहरू राज्य उपलब्धिहरू र आविष्कारहरू यो रूसी विज्ञान को कथा थियो छ कि महिमा गर्न इच्छा को आवश्यकता निर्धारण गरिन्छ। 19 औं शताब्दीमा, सबै को पहिलो, यस्तो गणित र प्राकृतिक विज्ञान को समस्या लिङ्क गर्न प्रयास गर्ने मिसिन र तंत्र को सिद्धान्त को खोज गरे Pafnutii Chebyshev, रूपमा वैज्ञानिकहरू "को प्रस्तुत"।
बैज्ञानिक को दुनिया को एक प्रमुख प्रतिनिधि एक महिला थिए सोफिया Kovalevskaya, जहाँ उनले गणित मा एक डक्टरेट प्राप्त, रूस मा उचित शिक्षा प्राप्त गर्ने सकेन र विदेश गए। तर, त्यो रूस प्रतिनिधित्व, र उनको काम संसारभरि मान्यता प्राप्त गरिएको छ।
रूस मा 19 औं शताब्दीमा विज्ञान भौतिक मा शानदार सफलता, चुम्बकत्व र विधुतीय फोटो घटना, साथै तीस वर्ष, मास्को राज्य विश्वविद्यालय विभाग को टाउको को लागि एक शिक्षकको रूपमा सेवा अध्ययन गर्ने अलेक्जेन्डर सम्राट Osvoboditel, जस्तै वैज्ञानिकहरू धन्यवाद हासिल गरेको छ।
हामी पनि उल्लेख गर्नुपर्छ रूसी रसायनविद् Dmitri Mendeleev, जो पत्ता बैज्ञानिक को आवधिक व्यवस्था रासायनिक तत्व।
एक पटक देशमा, त्यहाँ जो, पढ्न लेख्न पनि मिसिन शिक्षा आवश्यक परिवर्तनहरू बुझ्न सक्षम छन् जो योग्य मान्छे आवश्यक धेरै बिरुवाहरु र कारखानों, छन्।
सुधार को एक नम्बर, दुई वर्ष र चार वर्ष प्राथमिक विद्यालय चर्च विद्यालयमा सिर्जना गर्न मदत जो बाहिर थिए। Zemsky पनि काम पछि पत्र अध्ययन गर्ने वयस्कहरूको लागि अध्ययन बढि व्यापक कार्यक्रम र आइतबार विद्यालय थियो जहाँ प्राथमिक विद्यालय, खुलेको छ।
रूस मा 19 औं शताब्दीको दोस्रो आधा को विज्ञान माध्यमिक र tertiary संस्थानहरुमा प्रशिक्षण को नेटवर्क को विस्तार को लागि भनिन्छ। शहर (टम्स्क, ओडेसा, रीगा, Kharkov, कीव) विश्वविद्यालयहरु खोल्न थिए, प्राविधिक संस्थाहरु, र धेरै कृषि अकादमियों मा।
तर tsarist सरकार शिक्षा impeded, र धेरै सानो पनि प्राथमिक विद्यालयमा, खुला थियो, त्यसैले रूस साक्षरता अन्तिम स्थानहरू मध्ये एक थियो। यस शताब्दीमा महिला बीच मात्र 17% छँदा मात्र 28% को साक्षरता दर को अन्तसम्ममा।
माथि उल्लेख रूप मा, शताब्दीको पहिलो आधा मा आचरण मात्र प्रतिनिधिको तिनीहरूले भाषाहरू सिकाउनुभयो थिए जहाँ कम्तिमा केही शिक्षा, असल बेहोरा र Housekeeping पाए। महिलाहरु को लागि रूस मा 19 औं शताब्दीमा विज्ञान तिनीहरूलाई थियो विशेष गरी लागि, केही काल्पनिक र अबोध्य थियो -, पढ्न लेख्न सिक्न र सुन्दर व्यक्त गरे।
साधारण महिलाहरु को लागि प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय व्यावहारिक 60-एँ सम्म अवस्थित छैन। शैक्षिक संस्थाहरू पनि 70s देखा पर्न थाले, तर धेरै बिस्तारै, र विश्वविद्यालय गर्न भर्ना पूर्ण कुनै पनि वर्ग को महिला बन्द भएको थियो।
कारण सामाजिक आन्दोलन गर्न, यो धेरै महिला उच्च विद्यालय, चिकित्सा पाठ्यक्रम खोलिएको थियो, तर 20 औं शताब्दीमा महिला को क्रान्तिको अघि बराबर स्थितिमा थिएनन्।
को 19 औं शताब्दीमा रूस मा मानविकी विकास
देश को एक peculiar सुविधा जनसंख्याको निरक्षरता बहुमत को पृष्ठभूमिमा जहाँ त्यहाँ सामान्य विश्वको गर्न उल्लेखनीय खोल्ने थिए विज्ञान, को विकास को एक उच्च दर थियो थियो।
वर्तमान समय पुरातन समयका देखि रूस को इतिहास मा काम संग्रह सिर्जना 29 मात्रा मा, शिक्षाविद् Sergeem Solovevym द्वारा स्थापित भएको थियो जो, (को 19 औं शताब्दीको दोस्रो आधा) छ को रूप मा, मानविकी मा गरेको छ कि मुख्य कुरा। यो संग्रह , र आज देश को इतिहास मा सबै भन्दा व्यापक छ।
यो समयमा, त्यहाँ सबै शब्दकोश Vladimira Dalya, 2,00,000 भन्दा बढी शब्दहरू उठाएको छ, जो थाह थियो। पुस्तकमा शब्दहरू बाहेक हितोपदेश र वचनहरू, साथै विशिष्ट शब्दावली समावेश छन्।
अध्ययन रूसी साहित्य लेखक AN संलग्न Afanasiev ख्याति र रूसी दार्शनिक पनि प्राचीन रूसी साहित्य र लोकगीत, को शिक्षाविद् Buslaeva अध्ययन गर्ने को काम पाउनु भएको छ।
रूस मा 19 औं शताब्दीमा मानविकी सरकार परिवर्तन तानाबाना बिकसित हुँदैछ, त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समाजवादी प्रक्रियाहरू को जटिल प्रभाव अन्तर्गत आए, र मान्छे तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ जो साहित्य, प्रतिबिम्बित थियो जो देश, थप विकास तरिकाहरू देख थिए: महत्वपूर्ण यथार्थवाद, proletarian साहित्य र modernism ।
को 19 औं शताब्दीको परिणाम
रूस लागि, 19 औं शताब्दीमा मात्र शताब्दीको अन्त गर्न स्वतन्त्र भए जो किसान, जीवन देखि, जीवन को सबै क्षेत्रहरू मा, एक घटनापूर्ण धेरै विविध, heterogeneous र विरोधाभासी थियो, र चार राजाहरू, प्रत्येक कुरा राम्रो गरेको मा शासन संग समाप्त, तर केही कुरा यसलाई पूर्ण असफलता थियो। तर, विकास hampered सबै कठिनाइहरूको बावजुद, अभूतपूर्व हाइट्स पुग्न वैज्ञानिकहरू इच्छालाई विशेषता द्वारा रूस मा 19 औं शताब्दीको पहिलो आधा को विज्ञान, साथै दोस्रो। यस शताब्दीमा भर प्रविधिको सबै क्षेत्रमा आज बनाउन उच्चतम स्तर मा हो आविष्कारहरू गर्न।
अस्तित्व मानव Frome को सिद्धान्त आवश्यक
दानियल Bernoulli: जीवनी, फोटो, सम्भावना को सिद्धान्त विकास गर्न योगदान
सूर्य र यसको महत्त्व वरिपरि पृथ्वीको परिक्रमा
अन्तर्राष्ट्रिय एसआई सिस्टम - नयाँ संसारमा एकल मापन प्रणाली
खनिज लवण जीव
प्रकाश को अपवर्तन - शारीरिक अवधारणा को इतिहास
आत्म-sufficiency - यो के हो?
नुनीन सापट कसरी खाना पकाउनु। नुस्खा
वाद्ययन्त्रहरू को प्रकार: एक संक्षिप्त विवरण
कसरी multivarka "रेडमन्ड" मा फ्रान्सेली फ्राइज बनाउने?
"घाँस मा शीत के हो।" कलात्मक कथा-विवरण एल एन Tolstogo
के र कसरी गन्ध को लुगा धुने मेसिन सफा गर्न? उपचार को सबै विधिहरू
Amur काग रूख। स्वास्थ्य जामुन
छोराछोरीको शारीरिक शिक्षाको मुख्य माध्यम के हो?
ब्यान्ड धातु लागि देखे। धातु काटन लागि मिसिन
बाल बाल बन्द हटाउनका लागि एक नयाँ उपकरण। एक स्प्रे प्रयोग मा समीक्षा
निकोलस नाम: नाम मान, वर्ण, अनुकूलता, इतिहास र रहस्य को व्याख्या। दिन नाम जब कि निकोलस, नाम प्रतिनिधित्व सिक्न